'Ngaphezu kwamanzi' eLochbay-Ikhaya elikhulu kwisibini.
Waternish, Isle of Skye, United Kingdom
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguDavid & Jayne
Kwisibini esingenzi ‘compact’ ngeholide; indlu enkulu, enqabileyo, evalelweyo kwi-Waternish yomlingo. Izine, iifestile ezigcweleyo zobude zinika iimbono ezintle, ezingenakuthelekiswa nanto, kwiziqithi ezincinci ukuya kwi-Outer Hebrides. Bukela ukutshona kwelanga okuqaqambileyo kunye neenkozi zaselwandle ukusuka kwindawo enkulu. Igcwele ubugcisa bendawo, izityalo & nefenitshala ye-Ercol. Isitshisi sokungena kwi-cosy, ukuphumla, iiveki zasebusika, nokuba injani na imozulu.
Indlu ijonge ezantsi kwi-Stein entle, kunye neehambo zayo zesikhephe, iStein Inn kunye neMichelin eneenkwenkwezi, iLochbay Restaurant.
Onke amagumbi, ngaphandle kwendawo yokuhlambela, aneembono zolwandle ezifikelela kude. Akukho ndlela phakathi kwendlu kunye nemibono, ngoko awuyi kubona iimoto ngelixa usonwabela ezo mbono. Indawo enkulu ehonjisiweyo, izolile kwaye izolile. Yonke imifanekiso ekolu luhlu ithathwe endlwini okanye kwindawo yokuhombisa. Ngelishwa, imifanekiso ayibambi ubungakanani bendawo; oku ngokuqinisekileyo ayisiyiyo icompact, inguqulelo ye-bijou yokuphila kweeholide. Onke amagumbi abanzi kakhulu, nto leyo eyenza ukuba ilungele iiholide ezinde. Indlu ine-superfast, ifayibha ukuya kwi-fiber broadband ukuba unqwenela ukuhlala unxibelelana nehlabathi liphela. Khupha kwaye ujabulele iindawo zokuhlala ezahlukeneyo: funda, bukela i-tv, upheke, ngaphandle kokuba phantsi kweenyawo zomnye.
Le ndlu ivaliweyo ilawulwa ziifestile ezinkulu ezine, enye ekhitshini, ezintathu ezingaphezulu kwigumbi lokuphumla kunye nefestile enkulu yemifanekiso ecaleni kunye nesitulo sayo esihle sefestile. Itafile enkulu ye-Ercol ithetha ukuba ungatya kwaye ubukele ukutshona kwelanga okumangalisayo. Eli gumbi linesitovu seenkuni esibaswayo ngeengokuhlwa zasebusika ezipholileyo kunye ne-tv enamajelo amaninzi. Isitulo esikhulu esizaliswe ziintsiba ezine-squidgy sithambile eninokolula nobabini apha.
Eli likhaya lethu, ligcwele ubugcisa basekhaya kunye nezinto zobugcisa ezingaqhelekanga. Ayizukuba kwincasa yomntu wonke, kodwa ikhaya leholide elingathathi hlangothi ngokuqinisekileyo akunjalo! Indlu yonke ikwinqanaba elinye ngamaplanga aqinileyo, i-bamboo flooring yonke; iiragi zoboya ezaneleyo zongeza ukufudumala kunye nokuthuthuzela. Sibuthanda ngokukodwa ubusika kule ndlu, sibukele imozulu itshayelela echwebeni; ukukhanya okutshintshayo emanzini kuluvuyo lokwenene.
Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, eliqaqambileyo elinefestile yobude obugcweleyo linenye itafile ye-Ercol, ilungele isidlo sakusasa. Ucango lwasekhitshini lukhokelela kwidesika enezitulo ezibini, ezitofotofo ze-Adirondack, ezenzelwe thina eSkye, apho sonwabela ezo mbono. Sidla ngokubona ukhozi lundanda esibhakabhakeni ngaphezu kwendlu. Ikhitshi inayo yonke into onokuyilindela kwikhitshi langoku. Kukho i-dishwasher, i-oveni ephindwe kabini, i-microwave, isikhenkcisi sefriji, umatshini wekofu kunye nomatshini wokuhlamba, kwigumbi elisebenza ngokudibeneyo. Kukho ne-armchair yokonwabela loo mbono.
Igumbi lokulala elikhulu linebhedi elingana nenkosi kunye nebhedi yomqhaphu emhlophe yaseYiputa. Kukho ugcino olwaneleyo; ibhanki yonke yeewodrophu, kububanzi begumbi - awuyi kukhubeka phezu komthwalo wakho. Igumbi lokuhlambela le-en-suite linazo zombini ishawa emanzi kwi cubicle enkulu, kunye nebhafu etofotofo. Iyunithi yesinki efakiweyo ene-wc inokugcinwa okuninzi. Ubugcisa be-quirky buqhubeka kwindlu yangasese.
Iilogi zibonelelwa simahla, iWiFi isimahla. I-TV ineziteshi ze-Sky, kuquka i-BT Sport kunye ne-Netflix.
Kukho iimephu ezininzi, iincwadi, ulwazi lwabakhenkethi ukukunceda ucwangcise iiholide zakho.
Sijonge ngaphesheya kwelizwe lasentlango, elihlala iigusha ezimbalwa kuphela. Kwiifestile ezithile azikho ezinye izindlu ezibonakalayo. Ukuba unethamsanqa uya kubona amaxhalanga, kuquka namaxhalanga aselwandle ngaphezulu. I-peninsula ye-Waternish yonke inomdla: igcwele ukuhamba, imbali enegazi kunye noluhlu lwamathuba anomtsalane. I-jetty e-Stein inika inani lokuhamba ngesikhephe. Ungathatha uhambo losuku ukuya eSt Kilda, okanye enye yeehambo ezimangalisayo zeDivers Eye ngesikhephe, malunga neLochbay. UGordon iKapteni ngumgodi wolwazi kwaye uyakuthatha ezona foto zintle zeholide yakho, kwisikhephe sakhe. Kukho amahlengethwa, amatywina, iiporpoises kwaye ukuba unethamsanqa i-minke whale!
I-Overwater House yenye yezindlu zokuqala e-Waternish eyenza ukuhamba uye kwezinye izinto ezinomdla zomdla kube lula ngakumbi. Inqaba yaseDunvegan ikwilali elandelayo, kunye neCoral Beach edumileyo kumgama oziikhilomitha ezimbalwa ngaphaya.
Sihamba ngeenyawo rhoqo ukuya eStein, malunga nemizuzu engama-30 ukusuka apho. Saziwa ngokuhamba ngeenyawo okanye ngemoto ukuya eStein kwaye sibuye ngeteksi ukuba sichitha ubusuku kwi-pub okanye kwindawo yokutyela emangalisayo ezantsi phaya.
I-Skye 'yi-Foodie- Izulu'. Sinezinye zezona ndawo zokutyela zibalaseleyo eSkotlani. Iitshimini ezintathu ezidumileyo zimalunga nemizuzu engama-25 xa uqhuba. Ngoku sinendawo yokutyela entsha, i-Edinbane Lodge yolo lonwabo lukhethekileyo. Indawo yokutyela yeSikolo esiDala eDunvegan kunye ne-Edinbane Inn kunye nomculo wayo emva kwemini ngeCawa ithandwa kakhulu ziindwendwe zethu.
IPortree imalunga nemizuzu engama-35 yokuqhuba. Zininzi iindawo zokutyela apho kunye neziko lobugcisa elinethiyetha yomculo kunye necinema.
Umbuki zindwendwe ngu- David & Jayne
Nangona singaze siphazamise iindwendwe zethu sihlala sikhona ngoncedo okanye iingcebiso ngefowuni okanye i-imeyile okanye zivelela phantsi ukuze usibone.
UDavid & Jayne yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waternish